खर्बदार भारतलाई नसोधि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएला भन्ने नेपालकी यी सांसद को हुन् ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खर्बदार भारतलाई नसोधि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएला भन्ने नेपालकी यी सांसद को हुन् ?
काठमाडौ । लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको सीमा विवादलाई लिएर अहिले संसदमा खुब चर्चा हुने गर्दछ । यो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवम्‌ सांसद सरिता गिरीले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुअघि भारतसँग कुरा नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखेकी छिन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले दुःखेसो गरेकी हुन् ।
’ गिरीका अनुसार विदेश नीति जुवा होईन । अर्को फरक प्रशंगमा नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो रहेको र सरकार अहिले सेनालाई व्यापारमा संलग्न गराएर त्यसैमार्फत भ्रष्टाचार गर्न लागिपरेको उनको आरोप छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण, राहत र विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको पनि उनले बताएकी छिन्‌ । उनले संसदमा हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै आएकी छिन् । विवादमा आउँने अभिव्यक्तिका कारण उनको आलोचना पनि धेरै नै हुने गर्दछ ।
डाक्टरहरू भन्छन् : डिस इन्फेक्सन स्प्रे मान्छेका लागि होइन, बन्द गरौँ
हाम्राे कार्यक्रम जनताकै लागि हाे, जनताका कुरा उठाउन फेरि पनि कुनै कमी हुने छैन : रवि लामिछाने